माइक्रोम्याक्सले यस्तो चमत्कारीक मोबाईल नेपालमा लञ्च गर्यो « Janaboli
माइक्रोम्याक्सले यस्तो चमत्कारीक मोबाईल नेपालमा लञ्च गर्यो
काठमाडौ । स्मार्टफोन जगतमा माइक्रोम्याक्स विश्व प्रसिद्ध भारतीय ब्राण्ड हो। विस्तारै र निरन्तर रुपमा माइक्रोम्याक्सले आफूलाई उत्कृष्ट ब्राण्डको रुपमा स्थापित गर्दै आएको छ । माइक्रोम्याक्स state-of-the-art र बजेट अनुकुलफोनको लागि प्रसिद्ध छ । यो एउटा यस्तो ब्राण्ड हो जसमा तपाई पूर्णरुपमा निर्धक्क हुन सक्नुहुनेछ । माइक्रोम्याक्सले सधैं उत्कृष्टताका साथ आफ्नो ग्राहकहरुलाई खुसी राखेको छ र आफ्नो नयाँ प्रस्तुति t’lt Q4002 BOLT4लाइट ग्राहकहरुका माझ ल्याएर आफ्नो उत्कृष्टता फेरि सिद्ध गरेको छ । ग्राहकहरुले प्रत्येक फोनको खरिदमा आकर्षक ब्याग उपहार पाउने छन् । ग्राहकहरुले प्रतेक हफ्ता २५० MB एनसेल डाटा १२ हफ्ता सम्म निसुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।
बजारमा उपलब्ध अरु स्मार्टफोनहरु भन्दा उत्कृष्ट Q4002 BOLT,41.0 गाहर्जको क्वायकोर Processor का साथै १ जीबी र्याम रहेको छ । यसमा 5.0” FWVGA HD स्कृन रहेको छ जसमा ७२० बाई १२८० पिक्सेल रहेको छ । यसमाशक्तिशाली 2000 mAh को व्याट्री रहेको छ । यसमा 5MP हाई रेजुलेसनप्राईमरीक्यामरा र अगाडि पट्टी 5MP एसेल्फी क्यामरा रहेको छ । यसमा रहेको 1.0 GHz Quad-Core Processor ले यो सेग्मेन्टको सबैभन्दा उपयुक्त फोन हो, यो फोन चलाउन धेरै सजिलो र छिटो छ । यसमा 5MP Primary /2MP front camera जडित हुने हुनाले ग्राहकहरुले कनैपनि बेला लाखौं सुन्दर र उत्कृष्ट तस्विरहरु खिच्न सक्नेछन् । यो स्मार्टफोन एन्ड्रोयडको ललीपप ८.१ अपरेटिंग सिस्टममा आधारित रहेको छ ।
यसमा १ जीबी र्याम र ८ जीबी रोम रहेको छ जसलाई माइक्रौ एसडि कार्डको माध्यमले ३२ जीबीसम्म बडाउन सकिनेछ ।। यो फोनमा शक्तिशाली 2000 mAh को रिमुभेवल शक्तिसाली व्याट्री रहेको छ जसले धेरै गेम्सहरु खेल्न, भिडियोहरु हेर्न तथा अन्य विभीन्क कामहरु एकैसाथ गर्न सकिन्छ । यो फोनले फोजी नेटवर्क सहित दुईवटा माइक्रो सिम सपोर्ट गर्छ ।
Q4002 BOLT4फोनले प्रत्येकपटक उत्कुष्ट कार्य गर्छ । यो स्मार्टफोन सेग्मेन्टको सबैभन्दा राम्रो फोन हो जसले प्रयोगकर्ताहरुलाई सधै उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्नेछ । छिटो गर्नुहोस्, Q4002 BOLT4लाई अब केबल बजार मूल्य मात्र रु.८८००/– मात्र तिरेर आफ्नो बनाउन सकिन्छ । छिटो गर्नुहोस् चाडपर्वको उपलक्षमा यस माइक्रोम्याक्स Q4002 BOLT4को खरिदमा ब्याग उपहार प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
नेपालका हरेक मोटरसाईकल र स्कुटर चालकले जान्नैपर्ने यी कुरा
एजेन्सी । भनिएको छ की दुई पांग्रे विज्ञानको गलत आबिष्कार हो । आविष्कारकर्तापनि यो बनेपछि
थन्क्याउनुहोस् मोटरसाईकल : यो ठाँउमा आजै जानुहोस् , नेपालमै ११ हजारमा कार किन्न पाईने !
काठमाडौ । चीसो मौसम शूरु भएको छ । मोटरसाईकलमा चढ्दा चीसोले हैरान हुनु भएको छ
पारखीलाई खुशीको खबर : बिएमडब्लूको नेपालमा आयो बुलेटभन्दा सस्तोमा यस्तो मोटरसाइकल
काठमाडौ । जर्मन गाडी तथा मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी बिएमडब्लू मोटोराडले भारतीय बजारलाई लक्षित गर्दै टीभीएस
पैसा कसरी कमाउने ? : शतप्रतिशत काम लाग्ने यो जुक्ति [सेयर गरौँ]
एजेन्सी । पैसा कमाउने कसलाई रहर हुँदैन र । दिनरात मेहनत गर्दापनि कसैको कमाई भने